UMUDGEE OWADUMILEYO EMNYAMA ROSE COTTAGE
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAshleigh & Laurie
IBlack Rose yindawo ebukekayo ebuyiselweyo, enehombiso ekhaliphileyo kunye neendawo eziyilwe ngokugqibeleleyo zokonwabisa iqela kwaye zilungele iintsapho.
-Igumbi lokutyela elinezihlalo ezi-8
- ILungelo lokulala: Amagumbi okulala amabini ahlukeneyo kaKumkanikazi kunye negumbi lokulala elikhulu le-3 (enebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye nebhedi enye ukumkanikazi).
-Ikhitshi enendawo enkulu kunye nekona yokungcamla iwayini
-Indawo yomlilo yangaphakathi kunye nendawo yomlilo yangaphandle
- Isitulo sojingi severanda enelanga
- Iyadi ebiyelwe ngokupheleleyo
- Itafile yephuli / igumbi lemidlalo
- igumbi labantwana elikhulu; iibhedi, iithoyi kunye neTV, i-portacot kunye nesitulo esiphezulu
-Uhambo olufutshane olulula ukuya kumbindi wedolophu
-Imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwiingcango zeselula!
-ekhitshini sinomatshini weNespresso, isandwich press, plunger, microwave, toaster, blender, bbq & oven.
ILeafy east Mudgee enamakhaya amadala amakhulu kwizitrato ezingqongileyo. Thatha uhambo, uwole umlambo kwaye ungene edolophini ukuze ufumane ukutya okumnandi nesiselo! Hlala kwi-swing kwi-balcony emva kwemini kwaye ujabulele ukutshona kwelanga. Yiba neglasi ebomvu emlilweni kwaye emva koko uvale ubusuku ngokuzonwabisa kwigumbi lemidlalo. Siyayithanda kwaye sicinga ukuba uya kwenza njalo!
Umbuki zindwendwe ngu- Ashleigh & Laurie
I-Black Rose Cottage ilawulwa ngokuzingca kwaye isingathwe ngokudibeneyo nguLawulo lwePropati ye-Innkeeper Property - siye samkela amakhulu eendwendwe ezonwabileyo ekuhlaleni kwingingqi ye-Mudgee.
Ngokubhukisha nathi ukwaneliseka kwabathengi kuqinisekisiwe njengoko sizingca kakhulu ngokunikezela ngeenkonzo kunye nokugcina imigangatho ephezulu yococeko kumakhaya angenatyhefu; kunye nenkxaso yeendwendwe ezingama-24/7 kunye noncedo olukhoyo. Ilinen, iitawuli kunye nezinto ezibalulekileyo zibonelelwe ukuqinisekisa amava okwenene asekhaya kude nekhaya.
Sisebenza ngokukhethekileyo kwindawo yokuhlala enefenitshala yaphakathi ukuya kutsho kwiindwendwe ezijonge ukubhiyozela umsitho owodwa, ukonwabela iholide eyifaneleyo, okanye iinkampani ezifuna indawo yokuhlala ezinezivumelwano zokuqeshisa ezibhetyebhetye.
Sijonge phambili ekwamkeleni kwi-Black Rose Cottage.
I-Black Rose Cottage ilawulwa ngokuzingca kwaye isingathwe ngokudibeneyo nguLawulo lwePropati ye-Innkeeper Property - siye samkela amakhulu eendwendwe ezonwabileyo ekuhlaleni kwing…
UAshleigh & Laurie yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9184